Category:Ugaadhsi iyo Qadhaabsi - Wikipedia
Category:Ugaadhsi iyo Qadhaabsi
Ugaadhsi iyo Qadhaabsi sidoo kale loo yaqaano Qaraabsi iyo Ugaarsi (ingiriis: Hunting-Gathering) waa shaqada lagu soo ururinayo midhaha iyo khudaarta dhirta duurjoogta ah; iyo khiyaanada lagu dhaawacayo ama dilaayo neef xayawaan duurjoog ah.
Qeybtaan waxaa ku jirto 2 oo ah qeybaha hoose waana 2 oo dhamaantood ah.
► Leeb iyo Qaanso‎ (1 C, 3 B)
► Ugaadhsi iyo Qadhaabsi‎ (2 C, 4 B)
Bogagga ku jira qeybta "Ugaadhsi iyo Qadhaabsi"
waxaa meeshaan ku jira 4 oo maqaallo ah waxeena ku jiraan qeybtaan, waana 4 gud ahaan.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:Ugaadhsi_iyo_Qadhaabsi&oldid=123161"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 5 Jannaayo 2014, marka ee eheed 18:50.